Shaqaalaha Puntland oo afar bilood mushahar qaadan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Shaqaalaha Puntland oo afar bilood mushahar qaadan
Shaqaalaha Puntland oo afar bilood mushahar qaadan
Maamula madaxweyne Said Abdulaahi Deni ee mudada lixdan bilood jira ayaa afar bilood oo ka mid ah wax mushahar ah la qaadan. Shaqaalaha dowladda iyo dhamaan ciidamada Puntland ayaa wax mushahar ah la siin afartii bilood ee la soo dhaafay.
Wararka la helayo ayaa tilmaamaya in mushahar la’aanta sababtay dhaqaale badan oo lagu bixiyey xaflado iyo dabaaldegyo loo dhigay xuska 1-da Augost oo ku asteysan dhalashada Maamulka Puntland.
Dhaqaalaha ku baxaya xafladaha Puntland iyo kuwa dunida dacaladeeda ka kala dhacay lagu bixiyey ayaa waxay sababeen in dakhligii mushaharka lagu bixin lahaa in loo isticmaalo damashaadka iyo fabaniinta heesaha ka qaadaya xaafadaha.
Amaanka magaalooyinka qaar ayaa laga deyrinayaa, gaar ahaan magaalada Ganacsiga Bosaaso oo dilal iyo qaraxyo ka dhacayeen muddooyinkii lasoo dhaafay, mana muuqato maamulka madaxweynaha ka yahay Siciid Deni qorshe uu wax kaga qabanayo siyaasadda iyo Amaanka Bosaso.